यी हुन् नेपालका ‘टप १०’ सुन तस्कर !
ARCHIVE, NEWSPAPER » यी हुन् नेपालका ‘टप १०’ सुन तस्कर !
सामान्य चेकचाँचमा सुन बरामद हुदैन, बिना सूचना बाटोमा हिँडेको गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएर ४–५ घण्टा खानतलासी गर्न सम्भव नहुने हुँदा सुन तस्करी मौलाएको हो । दिनको सयौं गाडी केरूङ नाकाबाट काठमाडौं भित्रिन्छ । ति गाडी मध्य २–४ वटा गाडीबाट सुन पास हुँदै आएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट अबैध सुन बरामद गर्न थालेपछि सुन तस्करका नाईकेहरू छटपटाउन थालेका छन् । पछिल्लो एक बर्षको अवधिमा प्रहरीले काठमाडौं र रसुवाबाट मात्रै एक सय पचास किलो भन्दा बढी सुन बरामद गरेपछि तस्करहरू छटपटाउन थालेका हुन् । प्रहरीले मात्र होईन सुन बोक्ने भरिया र क्यारिङवाला स्वयम्ले सुन बोकेर फरार हुन थालेपछि झन सुन तस्कर तर्सित हुन थालेका छन् । एक बर्षको अवधिमा प्रहरीले बरामद गरेको बराबरको सुन भरिया र क्यारिङवालाले गायव बनाएको चर्चा यतिखेर तस्करबीच चल्न थालेको छ । नेपालका नामुद सुन तस्कर बौद्धका आम्डो घ्याम्चोले यतिखेर आफ्ना छोरा कुङ्गा टासीलाई प्रयोग गरेर सुनको तस्करी गर्दै आएका छन् ।
घ्याम्चोको सुन पटक–पटक बरामद भएपनि उनि भने कानुनको कमजोरीको फाईदा उठाउँदै उम्कन सफल भएका छन् । २०६९ सालमा काठमाडौं परिसरले बरामद गरेको १६ किलो, २०७० मा काभ्रेमा लुटपाट भएको १२ किलो, त्यसको लगत्तै काठमाडौं प्रहरीले बरामद गरेका ८ किलो सुनका मालिक घ्याम्चो थिए । तर उनी १६ किलोमा प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिएपनि राजश्व अनुसन्धान बिभागले जोगाएको थियो । तत्कालिन समयमा राजश्वका उपसचिव भरत सुवेदीले जोगाएका थिए । तिनै घ्याम्चो अहिले आफ्नो छोरा कुङ्गालाई अघि सारेर नियमित सुन तस्करी गर्दै आएका छन् ।